I-UC Davis ibekwe icala lokwehluleka ukukhipha amarekhodi womphakathi kuma-GMO kanye nezibulala-zinambuzane - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on August 18, 2016 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesine, Agasti 18, 2016
Iqembu labathengi i-US Right to Know wafaka icala ngoLwesithathu olwedlule ukuphoqa iNyuvesi yaseCalifornia, iDavis ukuthi ihambisane nezicelo zamarekhodi omphakathi ahlobene nomsebenzi wale nyuvesi wokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, izibulala-zinambuzane kanye nobudlelwano bayo nemboni yezolimo.
Kusukela ngoJanuwari 28, 2015, i-US Right to Know ifake izicelo ezirekhodiwe zomphakathi eziyi-17 no-UC Davis njengoba kuvunyelwe ngaphansi kweCalifornia Public Records Act, kepha inyuvesi inikeze amakhasi angama-751 kuphela ukuphendula zonke lezi zicelo, ngenkathi izicelo ezifanayo kwamanye amanyuvesi kukhishwe izinkulungwane zamakhasi lilinye.
I-UC Davis ayinikanga ukulinganiselwa kokuthi izohambisana nini nezicelo ezingagcwaliswanga, njengoba kudingwa ngumthetho. Ekuqaleni yayilinganisela ukukhiqizwa kwemibhalo ngo-Ephreli 2015. Iqede impendulo eyodwa kuphela - maqondana nomkhakha wesoda - kodwa azikho kulezi zicelo eziyi-16 ezihlobene nemboni yezolimo.
"Senza uphenyo olubanzi mayelana nokusebenzisana phakathi kwezimboni zokudla nezolimo, amaqembu abo aphambili kanye namanyuvesi amaningi aseMelika," kusho uGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know. “Kuze kube manje, imibhalo etholwe kwamanye amanyuvesi ikhombise ukuhlelwa kwemali eyimfihlo nemizamo ecashile yokusebenzisa imithombo yamanyuvesi exhaswe ngabakhokhi bentela ukukhangisa ngemikhiqizo yezinkampani ezahlukene. Umphakathi unelungelo lokwazi ukuthi kwenzekani ekusithekeni. ”
Lezi zambulo zimbozwe kufayela le- I-New York Times, Boston Globe, lo Guardian, Okwezwe, STAT, umama Jones nezinye izitolo.
Ukugcizelela ukungavuleki kwemboni yezolimo mayelana nezicelo zamarekhodi omphakathi e-US Right to Know, inkampani yabameli ehlangene nemboni yezolimo, uMarkowitz Herbold, uthathe isinyathelo esingajwayelekile ukufaka isicelo samarekhodi womphakathi yazo zonke izincwadi ze-US Right to Know ezibhalwe u-UC Davis, kufaka phakathi izimpendulo zazo zonke izicelo zamarekhodi omphakathi.
Eminyakeni engaphezudlwana nje kwamashumi amahlanu edlule, ngoJulayi 4, 1966, uMongameli uLyndon Baines Johnson wasayina umthetho weNkululeko Yolwazi waba ngumthetho. "Eminyakeni engu-XNUMX kamuva, i-FOIA iyithuluzi elibalulekile lokuthola inkohlakalo, ukwenza okungalungile, ukusetshenziswa kabi kwamandla, nokuvikela abathengi nempilo yomphakathi," kusho uRuskin. ICalifornia Public Records Act ingumbuso wesifundazwe saseCalifornia weFederal of Information Act.
Ummangali wecala nguGary Ruskin, esikhundleni sakhe njengomqondisi-co-co we-US Right to Know. Ikhophi yesikhalazo iyatholakala kwa: https://usrtk.org/wp-content/uploads/2016/08/UCDaviscomplaint.pdf
I-US Ilungelo Lokwazi iyinhlangano engenzi nzuzo ephenya ubungozi obuhambisana nohlelo lokudla lwenkampani, kanye nemikhuba kanye nomthelela wemboni yokudla kunqubomgomo yomphakathi. Siphakamisa umgomo wemakethe wamahhala wokungafihli lutho - ezimakethe kanye nakwezepolitiki - njengokubaluleke kakhulu ekwakheni uhlelo lokudla olungcono, olunempilo.
Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu, Amacala ethu